Filmy News | Artist Khabar | Page 7
Filmy News	जात्राको लागि वर्षा गइन् प्रदिपसँग डेटिङ	कार्तिक, काठमाडौं । नयिका तथा मोडल वर्षा राउतले नयाँ व्यक्तिसँग डेटिङ गएकी छिन् । कार्तिक २६ गतेदेखि प्रर्दशनमा आउन लागेको फिल्म ‘जात्रा’ ले गरेको अफर अनुसार उनले महाबौद्ध काठमाण्डौँ बस्दै आएका प्रदिप पौडेलसँग डेटिङ गएकी हुन् ।
प्रोमोशनका लागि हजार समाऔँ, लाख कमाऔँ अफर अन्र्तगत प्रदिपले वर्षासँग भेट गर्ने अवसर पाएका थिए । प्रदिपसँगको..	निखिलको ‘किङ’ आउँदो पुस २९ गते प्रदर्शन हुने	कार्तिक, काठमाडौं । नायक निखिल उप्रेती अभिनित चलचित्र 'किङ' आउँदो पुस २९ गतेबाट प्रदर्शन हुने भएको छ । 'किङ' पुस २९ मा रिलिजको लागी निर्माण कम्पनिसँग सहमति भएको वितरक गोपाल कायस्थले जानकारी दिएका हुन् ।
साथै त्यसै मितिमा 'किङ' सँगै 'कारखाना' पनि रिलिज हुँदैछ । सबिर श्रेष्ठ निर्देशित फिल्ममा निखिलसँगै वेनिशा हमाल, अनुपबिक्रम शाही, रुपा राना,..	सकियो ‘पञ्चायत’को छायांकन, निताको न्युड दृश्य खिचिएको हल्ला मात्र होत?	कार्तिक, काठमाडौं । चलचित्र ‘पञ्चायत’ को छायांकन सकिएको छ । छायांकन सुरु भएको २० दिनमै सकिएको निर्देशक शिवम् अधिकारीले बताएका छन् । आफुहरुले निकै मेहनत गरी दिनरात गरेर चाडै छायांकन सकेको र चलचित्रमा समावेश गरीने एक गीत तिहार पछि छायांकन गर्ने निर्देशक अधिकारीले बताए ।
५० बर्ष पुरानो कथामा बनाईएको ‘पञ्चायत’ बाग्लुङ सहित पश्चिमाञ्चलका..	हरिवंश आचार्यको स्वरमा ‘जात्रा’को गीत सार्वजनिक, कुरा छ पैसा र बैंशको (भिडियो)	कार्तिक, काठमाडौं । यहि कार्तिक २६ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्र 'जात्रा'मा समावेश गीत सार्वजनिक गरीएको छ । नोट नोट बोलको सार्वजनिक गीतमा हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्यले स्वर दिएका छन् । गीतमा पैसा र वैंशको कुरालाई जोडिएको छ ।
पैसाले मानव जीवनमा पार्ने उतार चढावको समिश्रण रहेको 'जात्रा'मा तिन पसलेको जीवनचक्र लाई देखाइएको छ..	‘कारखाना’को फस्टलुक सार्वजनिक, पुस २९ गते प्रदर्शन मिति तय	कार्तिक, काठमाडौं । चलचित्र 'कारखाना'को फस्टलुक सार्वजनिक गरीएको छ । पुस २९ गते प्रदर्शन मिति तय गर्दै फस्टलुक पनि सार्वजनिक गरीएको हो । सार्वजनिक फस्टलुकमा मुख्य कलाकार सुशिल श्रेष्ठ र बर्षा सिवाकोटी देखिएका छन् ।
अमरदिप सापकोटाको कथा तथा निर्देशन रहेको यो चलचित्रलाई सुदिप खड्का र अमर बज्रचार्यले निर्माण गरेका हुन् ।
चलचित्रमा मौसमी..	पैसाले जीन्दगीमा ल्याउने उतार चढावको समिश्रण हो ‘जात्रा’	गोपिकृष्ण चापागाई/ कार्तिक, काठमाडौं । आउँदो कार्तिक २६ गतेबाट नेपाली कथानक चलचित्र ‘जात्रा’ अल नेपाल प्रदर्शनमा आउँदैछ । फरक कथा र फरक सम्बादहरु प्रयोग गरेको देखिने जात्राको टिजर तथा ट्रेलर यतिखेर दर्शकमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय फरक तर अर्गानिक कथालाई समेटिएको चलचित्र दर्शकमाझ लोकप्रिय बन्दै गइरहेका बेला ‘जात्रा’ युनिट..	दयाहाङ राई अभिनित ‘ह्वाइट सन्’ मंसिर २४ मा आउने	कार्तिक, काठमाडौं । दयाहाङ राई अभिनित चलचित्र ह्वाइट सन् आउँदो मंसिर २४ गते प्रदर्शन हुने भएको छ । मंगलबार आयोजित प्रेसमिटमा ह्वाइट सन्को प्रदर्शन मिति घोषणा गरीएको हो ।
काठमाडौं इन्टरनेशनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभ (किम्फ) को चौधौ संस्करणमा फिल्म प्रिमियर हुनेछ । किम्फ मंसिर २३ गते २७ सम्म राजधानीमा हुँदैछ । दिपक रौनियार निर्देशित सेतो..	कात्तिक १९ मा ‘द विनर’ र नेपालमै छायांकन गरीएको हलिउड चलचित्र ‘डक्टर स्ट्रेन्ज’ बिच प्रतिस्पर्धा हुने	कात्तिक, काठमाडौं । आउँदो कात्तिक १९ गते चलचित्र 'द विनर' र हलिउड चलचित्र 'डक्टर स्ट्रेन्ज' बिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । हलिउड चलचित्र 'डक्टर स्ट्रेन्ज' नेपालमै छायांकन भएको चलचित्र हो । बितरण कम्पनी गोपिकृष्ण मुभिजले मंगलबार हलिउड सुपरहिरो फिल्मको रिलिज मिति आउट गरेको हो ।
सोहि मितिमा घरेलु फिल्म 'द फेमस' समेत प्रदर्शनमा आउने छ..	अमेरीकाको न्युयोर्कमा नेपाल चलचित्र ‘अमेरिकन बाबु मेड इन नेपाल’	कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा छायांकन भएको चलचित्र 'अमेरिकन बाबु मेड इन नेपाल' यतिखेर सम्पादनको क्रममा छ । निर्देशक ईश्वर थापाले निर्देशन गरेको यस चलचित्र आउँदो नयाँ बर्ष २०७४ मा प्रदर्शन मा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
चलचित्रमा नन्दिता केसी, इसान ढकाल, प्रियंका एर, प्रवेश उप्रेती, अन्जली लामा, सुरेन्द्र बास्तोला, राजेश गुरुङ,..	‘छक्का पञ्जा’को अस्ट्रेलियामा आजको १० औं शो पनि हाउस फुल	कात्तिक, काठमाडौं । चलचित्र 'छक्का पञ्जा' यतिखेर नेपालमा मात्र नभएर बिदेशमा पनि हाउसफुलका साथ चलिरहेको छ । नेपालमा ५१ औं दिन मनाइसकेको 'छक्का पञ्जा'ले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कमाउने चलचित्रको लिस्टमा आफ्नो नाम राख्न सफल भइसकेको छ ।
यसैक्रममा अस्ट्रेलियाको ईभेन्ट सिनेमा हलमा प्रदर्शन भइरहेको 'छक्का पञ्जा'ले आफ्नो १० औं..	Pages:«12345678910...35»